Ekwentị mkpanaka - Explogagharị na Mobile Landscape | Martech Zone
Ekwentị mkpanaka - Explochọgharị ihu igwe
Wenezdee, Machị 20, 2013 Adam Obere
Ngwa ngwa ngwa karịa ụmụ ọhụrụ? Ihe banyere nke ahụ yiri ntakịrị egwu… ma dikwa egwu n'otu oge. Na nyochaa akụrụngwa nke ngwa, ọ dị ka ọtụtụ egwuregwu, mana ngwa ọrụ azụmaahịa na-agbada n'azụ. Ekwenyesiri m ike na ị ga - ahụ ọnụọgụ ndị a ka ọ dị nso n'ọdịnihu, agbanyeghị, ka ụlọ ọrụ na - azụ ahịa na - agbaso usoro mkpanaka dịka akụkụ nke azụmahịa ha kwa ụbọchị.
Ọ na-aga n'ekwughị na smartphones na ngwaọrụ mkpanaka ndị ọzọ erutela ọkwa nke ebe niile. Anyị na-eji ha kwa ụbọchị, maka ihe ọ bụla site na ịme ndozi ụlọ oriri na ọ hotelụ ,ụ, maka ịlele akaụntụ akụ anyị, ịtụ pizza na ihe ndị ọzọ. Na ihe karịrị nde 1.5 dị na Apple App Store na Google Play, ndị na-azụ ahịa nwere oke nhọrọ enweghị oke ịhọrọ site na. Site na New Relic infographic, Ekwentị mkpanaka: Ihe kpatara Ọdịnihu ji abụ Mobile.
Tags: infographicmobile ngwamkpesa mkpanakaNew Relic
Inbound Marketing maka Obere Ahia
Ihe ize ndụ dị na SEO na otu esi emejuputa atumatu na-enweghị ntụpọ